Ngexesha nje loNyaka oMtsha iapp ye-iPhone yokuKhangela kunye nokuBona iiNdleko zakho | Plum emangalisayo
Ngexesha nje loNyaka oMtsha iapp ye-iPhone yokuKhangela kunye nokuBona iiNdleko zakho
UMHLA: ngoJanuwari 5, 2010
Elula kwaye kulula ukuyisebenzisa i-iPhone app ukulandelela usuku lwakho ekuchitheni usuku. Ukwenza inkcitho ngakumbi kunokunceda ukukhulisa ubutyebi bakho. Le app yenza kube lula ukulandela iingcebiso zabacebisi bemali yobuqu ukulandelela iindleko zakho zemihla ngemihla. Emva koko uyazi ngokuthe ngqo ukuba yonke imali yakho iya phi. Olu lwazi luya kukunceda ubone ukuba yeyiphi eyona nto ufuna ukuchitha kuyo kwaye ikuncede utyale imali ngobulumko.
Qala ukulandela usuku lwakho ekuchitheni usuku. Iluncedo ekwandiseni ukuncitshiswa kwakho kwetax kunye nokufumana isibophelelo kwindlela ochitha ngayo. Qala ukusebenzisa iindleko ze-iPhone namhlanje kwaye ubone ngokukhawuleza idatha kunye neegrafu yenkcitho yakho eyintloko. Lungiselela ukumangaliswa.
Iindleko zokuthoba apha (ziqondisela kwakhona kwiVenkile yokuThengisa i-iTunes ye-iTunes): http: //itunes.apple.com/us/app/expenses/id346691507? Mt = 8
Olunye ulwazi kunye nezinye iapps zethu zilapha: https: //plumamazing.com
Le app yenza kube lula ukulandela iingcebiso zabacebisi bemali yobuqu ukulandelela iindleko zakho zemihla ngemihla. Emva koko uyazi ngokuthe ngqo ukuba yonke imali yakho iya phi. Oku kuyakunceda ubone ukuba yeyiphi eyona nto ufuna ukuchitha kuyo kwaye ikuncede ekutyaleni imali ngobulumko.
Ungeniso olulula nolukhawulezayo- ujongano olukhulu lomsebenzisi- Iitshathi kunye negrafu yenkcitho- Thumela i-imeyile ngefomathi yespredishithi.
Isebenza ngayo nayiphi na imali! $, ¥, €, £, uyiqamba igama, nokuba yeyiphi na yemveli kwisixhobo sakho- izakusetyenziswa ziNkcitho. Ke, kuxhomekeke kwizixhobo zemvelaphi iya kukhetha ngokuzenzekelayo imali echanekileyo.
Umyili wale app waphefumlelwa zezi ncwadi zoncwadi kunye nabacebisi.
Utata osisityebi, utata ohluphekileyo: Izinto abazizityebi abazifundisa abantwana babo malunga nemali – ezingafunwa ngabantu abahluphekileyo nabakumgangatho ophakathi! NguRobert T. Kiyosaki noSharon L. Lechter
-Fumana uBomi bezeMali: IziMali zoBuntu kwiminyaka yakho yamashumi amabini nangamashumi amathathu nguBeth Kobliner
-Iimali zizonke ezenziwe nguDave Ramsey
-I-Barber Wealthy nguDavid Chilton
-Indoda esisityebi eBhabheli nguGeorge Clason
-Uhlala njani kakuhle ngaphandle kokuba nemoto nguChris Balish
-Oomama abagwenxa nguJonni McCoy
-Uvuyo lokuPhila ngokuLula nguJeff Davidson
Ubutyebi kumvuzo omncinci nguJames Steamer
-I-Millioinaire ezenzekelayo nguDavid Bach
- Esona sikhokelo sotyalo mali esiya kuthi sifuneke nguAndrew Tobias
Isikhokelo seBogleheads sokuTyala imali nguLarimore, uLindauer, kunye neLeBoeuf
Ewe, Unako… Ukufezekisa ukuzimela kwezeMali nguJames Stowers
- Nguwuphi umbala kwiBhanki yakho yePiggy? Ngu-Adelia Cellini Linecker
Le app isincedile kwaye siyayazi ukuba iya kukunceda ekulandeleleni kunye nasekuthatheni isigqibo ngeendleko kubomi bakho bezemali.
Iindleko zilula, azibizi kwaye zilula ukusebenzisa i-iPhone app ukulandelela usuku lwakho kwinkcitho yemihla ngemihla. Iluncedo ekwandiseni ukuncitshiswa kwakho kwetax kunye nokufumana isibambo kwinkcitho yakho.
IPlum emangalisayo Software esekwe yinkampani yabucala ebekelwe i-iPhone, iMac, iiWindows kunye nezicelo zeselula. IPlum emangalisayo ngumnikezeli wehlabathi wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995. Ngolwazi oluthe kratya, nceda undwendwele www.plumamazing.com